चिलीको पहिलो यात्रामा ज्वालामुखी र चमत्कार - 1aviagem.com
अघिल्लो पोष्ट: बर्लिनका सुझावहरू - जर्मनी - १० ठाउँहरू
अर्को पोष्ट: नायाग्रा फल्स बनाम फोज डो इगुआऊ सर्वश्रेष्ठ जलप्रपात के हो?
पोष्ट गरिएको 20 मार्च 2019 1 टिप्पणी द्वारा रोमोमो लुकाना
यी दिन म हालै व्यक्तिगत घटनाक्रम वा मेरो परिवारका मानिसहरूको साथमा भावनात्मक छु। यी निदानहरू र रोगहरू बीचको प्रश्नहरू जुन हाम्रो विश्वासको अधिक आवश्यकता हुन्छ। र त्यो भगवान बाट एक कदम चाहिन्छ।
त्यसैले मैले एक यात्रामा चमत्कारको बारेमा लेख्न निर्णय गरें। चिलीको पहिलो भ्रमणको क्रममा केही भयो।
म छोटो रिपोर्ट बनाउन प्रयास गर्नेछु, तर किन न्युनन्सहरू हराएर यो चमत्कारको रूपमा वर्गीकृत गर्छु।
2010 मा चिली जानुभएको थियो, यो विचार सान्टियागोमा पुगेको थियो र सेन्टियागो सम्म पुएर्टो मोन्ट्ट वा पुर्टो वरसमा पुग्यो, एन्डिस पार गरेर अर्जेन्टिना (बारिलो) लाई जान्थे। र मलाई साँच्चै त्यहाँ जानुभयो। विशेषगरि मेरो प्रिय साथी रिबेका पछि, के तपाईंले कृपया मलाई बताउनुहुन्छ कि पर्यटकहरूलाई भेट्न सक्रिय ज्वालामुखी थियो। मैले पहिला ज्वालामुखीलाई कहिल्यै भेट्न सकिनँ, र मैले मात्र यो गर्ने विचार पाएको छु! मैले पहिले नै लिपि गरेँ, तर रिबेका, जवान युवती हो जुन यस उपहार छ थाहा छ? मानिसहरूलाई समझाउन। म सम्पूर्ण यात्रा मदे, यात्रा कार्यक्रम, होटल आदि संग थिएँ। जब त्यो आउँछ, जस्तो कि उनले केहि पनि चाहँदैनन्, र भन्छिन्,
"ओहो, रोमुमिन्हो, तपाईं साँच्चै जाँदै हुनुहुन्छ, किन तपाइँ ग्रेटर लेक क्षेत्रको लागि किन बढाउनुहुन्छ? तिनीहरू भन्छन् कि एक सक्रिय ज्वालामुखी त्यहाँ त्यहाँ तपाईं यात्रा गर्न र अरू सबै चीजको साथमा हेर्न सक्नुहुन्छ! म गएको छैन, तर म जान चाहन्छु। "
आह! मलाई विचार छ! निस्सन्देह मैले मार्गहरू फर्काएँ र मैले चिलीमा7को सट्टा3शहरहरू थाहा पाएको छु। केवल त्यो भ्रमणको समय कम्तिमा कम हुनेछ! मैले ज्वालामुखी ओसोर्नो को भ्रमण गर्न सक्षम गर्न4दिन बुक गरेँ। (अझै पनि यो राम्ररी दौडिएको छ) यसको मतलब यो4माथि चढ्ने ज्वालामुखी को लागी प्रयास गर्ने र दिन बन्द हुनेछ।
वर्षा, चिसो र धेरै वर्षा
स्यान्टियागोमा सबै राम्रो र शान्त भए। (भविष्यमा म चिली राजधानीको बारेमा पोष्ट गर्नेछु) तर मेरो आश्चर्यमा, प्युर्टो मन्ट्ट, प्युर्टो वर्फ र इन्सेनेडाडा वर्षामा थिए! र एक ठंड सर्दी हो। को 10 डिग्री सेल्सियस सम्म)।
र ती दिनहरूमा कति धेरै बर्ष्यो
म प्यर्टो मोन्ट मा एक पसल नजिकै एक होटेलमा बसें। तर यहाँ एक टिप छ, यदि तपाईं जानुहुन्छ, म पोर्टो वारामा रिक्तिकाहरूको लागि जाँच गर्न सिफारिस गर्छु। यो अधिक पर्यटक छ। ठीक छ, अझै पनि पोर्टो मोन्ट मा वर्गहरूमा, वर्षा अन्तर्गत, मैले केईक, जो टूर गाइड हो भन्ने पत्ता लगाउन सक्थे। र समय समयमा इन्टरनेट खोज्न कठिनाई दिएका समयमा, अहिले सम्मको टूर भ्रमण गरिएको थिएन। ज्वालामुखीको भ्रमण गर्नु अघि मैले साइटमा सेवा भाडामा लिएको छु। त्यसैले मैले उसलाई काम गरें।
उहाँले मलाई केही लिपिहरू पठाउनुभयो र मलाई भन्नुभयो: यो वर्षको यस समयमा धेरै धेरै वर्षा हुँदैछ र ज्वालामुखीहरू शायद देखिने देखिन्छन् वा चढ्न अनुमति दिन्छ। यहाँका लागि जब यो वर्षाले7लाई एक पङ्क्तिमा दिन गुजराउँछ जब बादलहरू सानो देखिन्छन् र ज्वालामुखीहरू हेर्न सम्भव छ। यो हिउँको वर्षाको मौसम पनि सुरु भयो।
यो साँच्चै एक "ठंडे पानी नहा" उत्तेजना मा थियो। के यो नरम छ? म मौसम जाँच गर्न बिर्सियो। अनि मैले आफैलाई परमेश्वरलाई प्रार्थना गरेर सोधे: परमेश्वर, तपाई सबै कुराको शासन गर्नुहुन्छ, मौसम र वर्षाहरू नियन्त्रण गर्नुहुन्छ र हरेक बिहान सूर्य पठाउनुहोस्। कृपया तपाईंको बच्चालाई त्यो महसुस नगरी र त्यो मिशन पूरा गर्न नदिनुहोस् ... मलाई विश्वास छैन कि भगवानले मलाई दयालु हुनेछैन। म ब्राजिलबाट अहिलेसम्म आएको छु, मलाई केवल सबै कुराले खैरो खानु नदेखोस्! प्रभु सबै चीजहरू परमेश्वर हुनुहुन्छ, त्यसकारण कृपया सूर्य खोल्नुहुन्छ? आफ्नो महिमा देखाउनुहोस्, खुल्ला खोल्छ, खोल्छ ...
र यी दिन भित्र2ले यो कार्यक्रममा चिन्ह लगाइयो कि सिद्धान्तमा कम से कम बादलहरु बिना ज्वालामुखी ओसोर्नो हेर्न को लागी मानेको थियो। विचार थियो भने अवस्थाहरू सुधार भए र ज्वालामुखीको चढाईको खतरा घट्यो म यो गर्न सक्छु।
पहिलो दिनमा, कुनै परिवर्तन, र सुरक्षाको लागि हामी गर्म स्प्रिंग्समा जान्यौं।
वर्षामा 8 को ठंडमा कल्पना गर्नुहोस् ...
फ्रिज भित्र गीला लगाइरहेको थियो!
चिसोको विरोध गर्न, हामी थर्मल पानी भित्र पसेको छ जुन सिधै ज्वालामुखीद्वारा गरम हुन्छ ...
ज्वालामुखीबारे कुरा गर्दै
संयोगवश, मैले अझै सम्म उल्लेख गरेन कि चिली र अर्जेन्टिना को बीच महान झीलों को क्षेत्र मा, चार नजिकै को ज्वालामुखी हो, न सिर्फ एक को रूप मा मैले कल्पना गरेको थियो।
नजिकैका ज्वालामुखीहरू छन्: कबिलको, ओसोर्नो र पुन्टागुडो। तलको आकृतिमा रातो चिन्ह लगाइयो। यी चिली पक्षमा। र ट्रानाडोर ज्वालामुखी चिली र अर्जेन्टिनाको बीच सीमामा सही छ जुन सीमावर्ती छिमेकी हो।
यस क्षेत्रका महान झीलहरू भनिन्छ: Rupanco, Llanquehue, Petrohue, Chapo र अन्तमा Estero Reloncaví पोखरी।
चिलीमा ज्वालामुखी क्षेत्र
थर्मल पानी क्षेत्र को ज्वालामुखी गतिविधि द्वारा गरम र 40 को आसपास हो। यस परिधि भित्र। मलाई पनि भन्न आवश्यक छैन कि बर्फ को महसुस को लागि गर्मी को लागि धेरै आराम छ! त्यो चिसोमा न्यानो पानी! र तातो स्प्रिंग्सको ट्रयाक राख्न मैले एक भिडियो बनाएँ।
मलाई लाग्छ कि क्यामेरा जमेको हुन सक्छ र काम गर्ने मात्र प्रकार्य भिडियोको रेकर्डिङ थियो। के मैले आशा गरेन कि केइक गाइड बाटोमा पुग्थ्यो र भिडियो "टूर गाइडको साथ साक्षात्कार" हुन सक्छ!
लिंक जाँच गर्नुहोस् आफैलाई जाँच गर्न। (यूट्यूबमा पनि):
मलाई थाहा छ, मेरो पोर्टोनहो भिडियोमा भयानक छ, तर मलाई छुटकारा जाऊँ! lol यो मेरो देशमा मेरो पहिलो यात्रा थियो जुन स्पेनी (र म पोर्चुगल बोल्छ) बोल्छु जुन मेरो जीवनमा पहिले नै स्पैनिश पाठ थियो! जब सम्म म राम्रो भयो, ठीक छ?
वैसे पनि। अर्को दिन म फेरि फेरि ओभरर्नो हेर्न मिल्दैन। अनि मैले प्रारम्भिक ईश्वरलाई सोध्न थाले! स्वर्गबाट ​​ईश्वर, बादलहरू फर्कनुहोस्! कृपया! र मैले केकमा कुरा गरें। मैले भने: आज हामी Osorno हेर्न जाँदै हुनुहुन्छ !! (सबै उत्साहित!) र उहाँले मलाई भन्नुभयो:
"तर आज तेस्रो दिन हो, तपाई ज्वालामुखी देख्न सक्नुहुन्न ..."
मैले भने, आज कुरा छैन कि आज हामी सूर्य खुल्नेछौं! हामीसँग विश्वास छ!
उनले हल्लाए र अझै मकवानपुर ... उनले भ्यानको अरूलाई भने।
"यहाँ हाम्रो ब्राजीलिया छ जसले आजको ज्वालामुखी देख्नेछौं, र यदि सम्भव छैन भने, यसले बादललाई धेरै टाढा उछाउनेछ, र हामी सबै ज्वालामुखी ओसोर्नो देख्न सक्छौं!
र सबैलाई सुरू!
अनि म परमेश्वरसित कुरा गर्ने बाटोमा गए। यसो भन्छ:
"हे परमेश्वर, अब तपाईं संग हुनुहुन्छ, यदि तपाईले गर्नुहुन्छ भने, म तपाईंको नामको महिमा गर्नेछु, यदि तपाईं छैन ... राम्रो हुनुहुन्छ, तपाईले मात्र आफैले अनुग्रह पाउनुहुनेछ। र म असंभवमा अर्को विश्वासी हुनेछु। "
र वर्षा आउँदैछ। र भ्यान मा केहि चिली यसो भन्दै थिए, "यो शर्मिन्दा हो कि तिनी ब्राजीलबाट यहाँ आए, र सम्भवतः ओसोर्नो हेर्न सकिन।"
वैसे पनि, हामी आइपुगे! र वर्षा सब्सिभ सुरु भयो ... जस्तै कि यो पर्दा कि ढिलो गुलाब थियो ... र बादल बाहिर आउँदै थिए !!
र अन्तमा बारम्बार एक क्रूस दिइयो! परिणाम? चिलीका सबैभन्दा सुन्दर छवि पछ्याउँछ!
र जब म भ्यानमा फर्क्यो, मैले केकलाई भने, "हेर! तपाईंसँग मात्र विश्वास छ! अनि त्यसपछि अरू पनि!
विश्वास कसरी पर्वतमा पर्दछ हेर्नुहोस्! र यस अवस्थामा वर्षा र बादल! ब्राजिलको विश्वासको भरपर्दो भित्री भावना पनि होइन! (यस अवस्थामा पहाडहरू हिँड्दा कि चार मध्ये ज्वाला ज्वालामुखी छन्, राम्रो विचार हुन सक्दैन। त्यसैले यो केवल वर्षा र बादलहरू मात्र उत्प्रेरित हुने थियो।
र अन्तिम दिन, म फेरि ओसोर्नो पुग्यो, मौसम स्थिर थियो र म चढ्न निर्णय गरे। सुरक्षा क्लाइन्ट दिईयो।
र ... वाह, बादलको पछि क्षितिज रेखामा ज्वालामुखीको शीर्षमा रहेको अनुभवको भावसिंह हो!
ओसोर्नोको शिखरबाट हेर्नुहोस्
र साहसिक कार्य पुरा गर्न यो अझै पनि जिप लाइनहरू प्राप्त गर्न सम्भव थियो।
तिनीहरू 1.600 मीटर उच्च र रस्सी जिपलाइन हुन्। केहि शब्दहरू वर्णन गर्ने प्रयास गर्दै ...
पेट + ऊंचाई मा ठंड + आजादी + सुंदर दृश्य = सनसनीखाना।
दुर्भाग्यवश यो रेकर्ड गर्न सम्भव थिएन।
केवल यो तस्बिर मूल भन्दा पहिले छोडियो।
ओह र यस वैन कर्मचारी को लागि यो ब्राजील को बारे मा चिंतित थियो ओसोर्नो को देखने मा सक्षम नहीं, अन्त मा उनि अझै पनि विश्वास को चमत्कार को प्रशंसा गरे। सबैजना ज्वालामुखीको पार्कको सुन्दर दृश्यले आशिष् पाएको थियो। सबैजना चलेको छैन, तर हामी धेरै इतिहास र जीवनमा अधिक अनुभव संग घर फर्केर पक्का छौं।
वान कर्मचारीहरु संग लंच
व्यानमा ब्यक्तिहरु खुसी हुनुहोस्
र कुनै व्यक्तिको लागि टिप ज्वालामुखी माथि माथि वा तल जान चाहदैन जुन राम्रो भौतिक प्रशिक्षण गर्न थालेको छ, जस्तै ग्लेशियर चढ्ने जस्ता। तपाईंको आफ्नै खुट्टामा, केबल कार विकल्प छ। म चढ्न प्रयोग गरें र मलाई लाग्छ यो यसको लायक छ। धेरै ऊर्जा र समय बचत गर्दछ। निस्सन्देह, यदि तपाईं उचाइ वा ठाडो डरलाग्दो हुनुहुन्छ भने सिफारिस गरिएको छैन। तर केबल कार संग चढाई सजिलो छ। कसैले यो राम्रो समय मा गर्न सक्छ। या त तपाईंले हाइट्सको डरलाई हराउनुभयो, वा तपाईंलाई केही अतिरिक्त क्यालोरी पैदल मा बर्फ मा चढ्नु पर्छ। यदि तपाइँ ज्वालामुखीको शिखर भ्रमण गर्न चाहानुहुन्छ भने।
केबल कार उच्च,
अनि जीवन जस्तो छ, जसले विश्वास छ र परमेश्वरको साथ हिंड्छ, चमत्कारहरू हेर्छन्, जसले विश्वास बिना हिंड्छ ... सँग कुनै पनि विचार र सुन्दर अनुभवहरू छैन, कुनै कथाहरू बिना।
त्यसैले यस जीवनमा कम विश्वास छ।
संक्षेपमा यो कथा6छवियों मा भनिएको छ:
परमेश्वरसित करार सम्झनुहोस्
वर्षा बिना ज्वालामुखी
अर्को पोस्ट सम्म। (I.e.
इतिहास Cabulco चिली विश्वास चमत्कार ओसोर्नो Tronador ज्वालामुखी
त्यहाँजा प्यानिसन लेमोस
मार्च 22 देखि 2019 सम्म 20: 14